ရုရှားအင်ပါယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အလံတော် Lesser coat of arms
("The Prayer of Russians")တမ်းပလိတ်:Parabr
("God Save the Tsar!")တမ်းပလိတ်:Parabr
ရုရှားအင်ပါယာ [မှတ်စု ၁] အင်ပါယာများထဲတွင် ဥရောပအာရှ နှင့် မြောက်အမေရိက, 1721 ကနေ အဆုံးတွင်အောက်ပါ ၏ ဂရိတ်မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲ ဟာတိုင်အောင်, သမ္မတနိုင်ငံ ကကွညောခဲ့ ယာယီအစိုးရ အတွက်အပြီးအာဏာကိုလုယူသော ဖေဖော်ဝါရီလတော်လှန်ရေး 1917 ၏။   သမိုင်းတွင် တတိယအကြီးဆုံးအင်ပါယာ သည်ဥရောပ၊ အာရှနှင့်မြောက်အမေရိကတိုက်များ၌အများဆုံးရှိပြီးရုရှားအင်ပါယာသည် ဗြိတိသျှ နှင့် မွန်ဂိုအင်ပါယာများ ကသာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ: ရုရှားအင်ပါယာ၏မြင့်တက်အိမ်နီးချင်းပြိုင်ဘက်အင်အားကြီး၏ကျဆင်းမှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် ဆွီဒင်အင်ပါယာ သည် အဘိဓာန်ပိုလနျအာနီယံဓနသဟာယ, ပါရှား နှင့် အော်တိုမန်အင်ပါယာ ။ နပိုလီယံ ၏ဥရောပကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်မှန်းချက်များကိုအနိုင်ယူပြီးအနောက်နှင့်တောင်သို့တိုးချဲ့ရာတွင် ၁၈၁၂ - ၁၈၁၄ တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
၁၇၂၁ ခုနှစ်တွင်ရုရှားအင်ပါယာအဖြစ်ရုရှားအင်ပါယာအဖြစ် ပီတာမဟာသည် အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီးပထမဆုံးemကရာဇ်ဖြစ်လာသည်။ သူသည် ကျယ်ပြန့်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စတင်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံအားဥရောပ၏အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုကြီးကြပ်ခဲ့သည်။
↑ ရုရှား: Россійская Имперія, Российская Империя, tr. Rossiyskaya Imperiya, ရုရှား အသံထွက်: [rɐˈsʲij.skə.jə ɪmˈpʲe.rʲɪ.jə].
↑ "The Sovereign Emperor exercises legislative power in conjunction with the State Council and State Duma". Fundamental Laws, "Chapter One On the Essence of Supreme Sovereign Power, Article 7." Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
↑ Geoffrey Swain (2014)။ Trotsky and the Russian Revolution။ Routledge။ p. 15။ ISBN 9781317812784။ The first government to be formed after the February Revolution of 1917 had, with one exception, been composed of liberals.
↑ Alexander Rabinowitch (2008)။ The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in Petrograd။ Indiana UP။ p. 1။ ISBN 978-0253220424။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရုရှားအင်ပါယာ&oldid=563624" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။